दुई ढुङ्गा बिचको तरूल डाईनामाईट झैं पड्किदाँ ! – Himalitimes
२०७६ पुष २६ १०:४५ मा प्रकाशित
पश्चिमा नर्वेजियन तथा ब्रिटेनलाई धर्म फालेर रिलिजन लाद्न थियो । बाईसे चौविसे राज्य ताका नेपाल पुर्वीय दर्शनको शीर थिय‍ो । विशाल भारत मुस्लिम र क्रिश्चियन सम्राटले आक्रमण गर्दै धर्म र सांस्कृतिक माथि हमला गरि तहस नहस पारि महिला जति बलात्कार गरी नया नस्ल जनसंख्याको जमात तयार पारिसकेका थिए । एकिकरण का नायक तथा युद्वका वीर सिपाही पृथ्वीनारायण र तिनका सन्तानको शासकीय पद्वती ,चलाखी तथा बहादुरीले गर्दा नै कसैको बिस्तारवाद र साम्राज्यवादको सामान्तीय जिनको अधिनमा नेपाल थिएन । तसर्थ नै वैदिक सनातन धर्म तथा संस्कृतिको बाधा शाहवंशीय राजा र श्री ५ बडा महाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यकामा डेरा जमाएर बसेका ईटालियन पादरी लखेटेर नेपाललाई असली हिन्दुस्थाना बनाउन खोजेको बदला लिन पनि राजसंस्था फाल्न थियो र उचित मौकाको पर्खाइमा थिए ।
जब भारत बिदेशीको गुलामी पश्चात् मुक्त भयो । गान्धीको शासन समयमा भारतमा नेहरू डक्ट्रिन सल्बलाउन थाल्यो जसरी राजेन्द्र प्रसाद नेपाल भारतको अधिनमा देख्न चाहन्थे ।नेहरू हिमाल सम्म भारतको अधिनमा रहनु पर्ने सपना देख्दथे । भारतमा पालित पोषित तथा न्वारन गरिएका दुई पार्टिलाई प्रभावमा ल्याई राणा शासन फाल्ने काम भयो । नजरवन्दमा रहेका राजा त्रिभुवनलाई प्रयोगमा ल्याई प्रजातन्त्रको जप गर्दै आफु मुक्त हुन पार्टीको सहयोगमा राणा शासन ढाले । जसको प्रत्यक्ष फाईदा भारत लिई नेपाललाई आफ्नो अधिनमा राख्न जाल बिच्छाए भारतीय शासकको नेपाललाई भारतमा गाभी राजा त्रिभुवनलाई राष्ट्रपति हुने प्रस्तावलाई उल्टै भारतलाई नेपालमा गाभि देशको नाम नेपाल राखौं भनी कटाक्ष गरि झोक्किएर फर्केका थिए युवारज महेन्द्र ।
राजा त्रिभुवनको मृत्यु पश्चात्को विषम परिस्थितिमा नेपालमा राजा महेन्द्रको उदय भयो । झण्डै सिक्किकरण भोगी सकेका देशलाई राजा महेन्द्रले बहुत चलाखी पुर्वक युएनमा नेपाललाई दर्ता गराई स्थापित गरे । ज्ञात रहोस् वीपीले कसैको उक्साहटमा नेपाललाई युएनको सदस्यता नदिलाओस् भनी उजुरी पत्र पठाएका थिए । तत्पश्चात चलाख तथा राष्ट्रवादी राजा महेन्द्रले चीन देखि ,रूस , ब्रिटेन , फ्रान्स ,संयुक्त राज्य अमेरिका सबैलाई आफ्नो कुटनितीको जालमा पारि सकेका थिए । भारत भर्खर ब्रिटीस बुटबाट मुक्त भएका थिए र कुटनैतिक रूपले आफु कमजोर पर्ने हुनाले केही गर्न सक्ने अवस्थामा पुगिसकेका थिए । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय तथा कुटनैतिक क्षेत्रमा निकै अगाडि बढिसकेको थियो । आफ्नै भाषा , सभ्यता ,लिपि , संस्कृति , मुद्रा , सुरक्षा सेना ,शिक्षा प्रणाली ,कलकारखाना स्थापित गरिसकेका नेपाल अग्रगामी छलाङका साथ अगाडि बढ्दै थियो । तसर्थ भारतले राजा र राजसंस्था एकदम बाधाको रूपमा देखि सकेका थिए । यो पनि उपयुक्त समयको पर्खाइमा थियो । अकस्मात् देशभक्त राजाको स्वर्गबास भयो ,राजा वीरेन्द्रको शासन शुरू भयो जो गाई जस्तो सोझो ,जनप्रिय र शान्तिप्रिय थियो ।
विश्व सामु नेपाल शान्ति क्षेत्रमा घोषित गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा सारा संसारले सहर्ष स्विकार गरे तर भारतले मानेन । दिन दहाडै काटामार हुने देश भारतले कुकुर मर्दा भनी शोक मनाउने देश नेपालको शान्ति प्रिय बाटोको बाधक हुने ठान्नु कुनै अाश्चर्यको बिषय थिएन । नेहरू डक्ट्रिनका भोका प्रधानमन्त्री ईन्दिरा गान्धीको भुटानीकरणलाई ,पुर्ण स्वतन्त्रता नेपाल हो भन्ने बिश्वस्त दिलाउने राजा वीरेन्द्रलाई त झन के सहन सक्लान् ? बिदेशी ग्राण्ड डिजायनबाट परिचालित कुख्यातबाट दरबार हत्याकाण्ड मचाएर राजा ज्ञानेन्द्रलाई असहज बातावरणमा राज्यरोहण गराए पछि सहजै नेपाल भुटान सरह लिन पाईन्छ भनी बिदेशी शक्तिको साशस बढ्यो । यता राजालाई थिलो थिलो पार्न माअोवादी जन्माईएको थियो । राजा ज्ञानेन्द्रलाई फेरि पनि भुटानीकरणको प्रेसर आउन थाले । बिदेशीका औलामा नाच्ने नेता ,बिदेशीको पैसा र तालीममा उध्धुम मच्चाउने माओवादी र अवुझ नेपाली जनताले गर्दा अन्तत राजा ज्ञानेन्द्रले हार खाए ।
एक चीन एक निती अन्तर्गत चीनको अभिन्न अङ्ग मानिएको ताईवान युएनको भिट्टो पावर सहितको सुरक्षा परिषदमा ताईवान चुन्निने अबस्थामा थियो । राजा महेन्द्रले चलाखीपुर्ण तरिकाले चीनबाट छुट्टिएको भाग ताईवान भन्दा चीन नै सुरक्षा परिषदमा भिटो पावर सहितको पदमा उचित भन्ने तर्कले गर्दा चीन गरिमामय तथा शक्तिशाली पदमा पुग्यो । यसले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई ठूलो धक्का पुगेको र राजा महेन्द्रबाट त्रसित देखिए भन्ने विश्लेषण छ । संयुक्त राज्य अमेरिका पनि एउटा सहज दाउमा नै थिय‍ो । चीन एकदिन सामारिक पावरफुल राष्ट्र हुनेछ र संसारमा उसको दवदवा हुनेछ भन्ने बुझिसकेको थियो । चीनलाई र भारत दुवैलाई काउन्टर दिन सहज भुमि भनेको नेपाल नै हो । ब्रिटेनलाई पनि आफुलाई धपाएको प्रति भारतसँग केही न केही असन्तोष छ भने शीतयुद्व ताका भारत रसियासँग घनिष्ठता थियो ।
नेपाल भारत र चीनलाई खेलाउनको लागि बिश्वको लागि उत्तम भुमी हो । माओजेतोङले नेपालका राजसंस्थालाई असल मित्रको रूपमा लिन्थे । पश्चिमाको लागि धर्म र संस्कृति सिद्वाउन ,भारतलाई हिमाल सम्म आफ्नो सीमा पुराउनको लागि राजसंस्था बाधक थिए भने संयुक्त राज्य अमेरिकालाई राजसंस्था र चिनसँग गहिरो साम्बन्धले गर्दा झोक चलिरहेको थियो । तसर्थ पृथ्वीनारायण देखी ,राजा महेन्द्र , राजा वीरेन्द्र , राजा ज्ञानेन्द्र सम्म बदला लिन सबै एक ढिक्का भए । नेपालमा दलाली सहजै पाउने भएकाले पार्टीहरूलाई प्रयोगमा लिए ।
तसर्थ नै २०४६ सालको जन आन्दोलन ,दरवार हत्याकाण्ड ,शसस्त्र जनयुद्व ,६२/६३ आन्दोलन , राजसंस्था बहिर्गमन ,गौर हत्याकाण्ड ,टिकापुर हत्याकाण्ड आदि काण्डहरू भयो । पश्चिमा र अमेरिकाले धन र हतियार दिई भारतीय खुपिया एजेण्ट प्रयोग गरी माओवादीलाई भारतीय भुमिमा तालिम गर्न लगाए । बिडम्वना राष्ट्र निर्माता , बिदेशका चङ्गुलबाट बचाउने , नेपालको अस्तित्व र पहिचान दिने , शान्तिका प्रतिक र बिकासका खाका कोर्ने , जनताको लागि बिदेशीसँग कुटनैतिक चाल अपनाई बाटो घाटो , पुल पुलेसो , कलकारखाना तथा उध्योग बनाउने , व्यबस्थाको लागि जनताको एक थोपा पनि रगत खेर जान हुन्न भन्ने , आफ्नो देशको अस्तित्व र भुमि रक्षार्थ मर्न तयार हुने राजा जनतालाई पचेन । बिडम्वना ठ्याक्कै यसको उल्टो कालो कर्तुत गर्ने दलालहरू ,सत्ताको लागि अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्ने देशको ढुकुटी सिद्वाउनेलाई जनताले भोट दिएर ससम्मान जिताउने काम गर्छन् । यहि धेरै कारण नै बहिर्गमनको मुख्य कारक तत्व रह्यो ।
तसर्थ पश्चिमा ,भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्वार्थ अनुरूप राजा फाल्ने कुरामा सहमत भई अन्तत दलाल , कठपुतली ,दास तथा गुलामहरूको सहयोगमा राजसंस्थालाई सहजै फाल्न सफल भए । गणतन्त्र पछि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको दास मानसिकता सहितको कुटनिती छर्लङ्ग भईसकेको छ भने नेपालको राजनीति लथालिङ्ग भई देश नै रहला नरहलाको स्थितिमा पुगिसकेको अवस्था छ ।
चीन पनि नेपालको घनिष्ठताको सम्बन्ध भन्दा टाढा भईसकेको छ ।,भने अरू बिदेशी शक्ति त नेपाललाई गुलाम नै बनाउने दाउमा छन् । चीनले बिश्वमा आफ्नो व्यापारिक सञ्जाल बढाईसकेको अवस्था छ । नेपालमा आफ्नो व्यापार बढाउनु भन्दा पनि नेपालले प्रत्यक्ष बिकासको फाईदा लिओस् भन्ने छ ।,त्यसैले नेपालमा पनि भौतिक संरचनाले अरू बिश्वसँग जोडिने किसिमले बिआरआईको रूपमा पुर्वाधार बिकासमा जोड दिएको हो । चीनको राष्ट्रपति भ्रमणको बेलामा नेपालको पुर्वाधार बिकासको लागि सन्ताउन्न अरव दिएको थियो । हुन त मुखले मात्रै भारतले पनि २०७२ साल भुकम्प गएको बखत त्रिपन्न अरव दिएको थियो । पैसा दिने नै क्रममा अमेरिकाले पनि पच्पन्न अरव दिई टोपल्यो ।
चीनले बिआरआईमा नेपाललाई सहभागी गर्ने बित्तिकै एकै चोटि भारतबाट लिम्पुवाधुरा ,लिपुलेक , कालापानी नेपालको भुमि आफ्नो नक्सामा राखेर प्रकाशित गर्यो । यसै समयमा पच्पन्न अरवको लोभ देखाएर मिलनियम प्रोजक्ट एमसिसिको नाममा सहयोगको चास्नि अघि सार्यो । नेपाल ईण्डो प्यासिफिकको फण्डामा फस्न कुनै पनि हालतले हुन्न भन्ने समयमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाललाई एमसिसिको नाममा फसाउन लागेको अवस्था छ । फेरि पनि कुन‌ै पनि बहानामा नेपाल त्रीशक्तिको अगाडि फसीसकेको अवस्था छ ।
श्री ५ बडामहाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाहले हुकुम भए अनुरूप नेपाल दुई ढुङ्गा बिचको तरूल हो । विश्व कुटनैतिक हिसावमा कुनै समय शक्तिशाली देश धेरै नै कमजोर तरूल जस्तो कमलो छ । उहाँको दिव्य वाणी अहिले आएर सान्दर्भिक देखिएको छ । चीन बादशाहसित ठूलो घा राख्नू । दख्खिनको समुद्रका बादसाह घा त राख्नु , त्यो महाचतुर छ । हिन्दुस्थान दबाई राखेछ । सरजमिन परि रहेछ । हिन्दुस्थान जम्यो ( मिल्यो ) भने कठिन पर्ला भनी किल्ला खोज्न आउनेछ । चीन विश्व नम्बर एक बन्ने दौरानमा जसरी तिब्र गतिले आफ्नो जाल फिजाएर दौडिरहेको छ । सुझबुझका साथ कुटनैतिक तथा छिमेकि सम्बन्ध मिलाउन सकेन भने चीनका राष्ट्रपति सी जिङपिङले हड्डी चकनाचुर पार्दिन्छु भने झैं नेपालले त्यो नियति भोग्न नपरोस् । बिदेशी सम्राज्य र बिस्तारवादले जुन किसिमले नेपाललाई धर्म संस्कृति तथा राष्ट्र र राष्ट्रियताको वलियो खम्वा उखडेर फाल्न सफल भयो त्यो त झन् ठ्याक्कै मिलेको छ । अझ पश्चिमाको गुलाम भारतले ठ्याक्कै आफ्न‍ो मालिकले झैं नेपाल प्रति पटक पटक दुरव्यवहार गरिरह्यो र नेपालको भुमि नै आफ्नो नक्सा भित्र हाल्यो । जसले राजाहरूको दुर्दर्सिता मिलेको छर्लङ्गै हुन्छ । उदेक लाग्ने कुरा त भारतले हाम्रो सीमा मिची रहँदा गोर्खाको बासिन्दा अर्जुन थापा मगर पाकिस्तान सँगको सीमा नजिक सीमा जोगाउँदै गर्दा जीवन आहुती दिन पर्यो ।
अझ अनौठो कुरा नेपाली भारतीय गोर्खा रेजिमेण्टबाट लडेर देह त्याग भयो भने तिनका शव दाहसंस्कार गर्न नेपाल फर्काउन दिंदैन ,शव उतै भारतीय झण्डा ओढाएर अन्त्येष्टि गरिन्छ । यसो हेर्यो भने नेपालको भुमी अहिले दुई ढुङ्गा बिच तरूलको रूप नभई एक भयङ्कर बिष्फोटक डाईनामाईटको रूपमा परिणत हुँदैछ । यदि पड्केमा पहिला आफै ध्वस्त हुन्छ ।,तर बाघछिटा परे झैं थ‍ोरै रूपले चीन र भारतलाई असर गर्ला । झन् चीनका महामहिम राजदुतले भर्खरै प्रेस कन्फरेन्स गरेर नेपालले एमसिसि सम्झौता गरे चीनलाई केही असर पर्दैन त्यो नेपालको आन्तरिक मामला हो भन्दा नेपालका नालायकहरूले केही बुझ्दैनन् झैं लाग्छ ।
अन्तमा नेपालीले अब देश दुनियाको परिस्थितिको सार बुझ्न अत्यन्तै आवश्यक छ । मेरा साना दुखले आर्ज्याको मुलुक होईन ,सबै जातका साझा फुलबारी हो । यो मुलुक यश देशको राज मुकुटले बलले मात्रै नभई बुद्वि बिवेक प्रयोग गरेर बचाएका हुन् । यो मुलुक निर्माण हुँदै गर्दा राजा जनता र सिपाहीले रगत तथा पसिना अथाहा रूपले बगाएका थिए र चातुर्यपुर्ण रूपले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सफल कुटनैतिक प्रयोग गरेर यो देश बचाएका थिए । जनताले बुझ्नु पर्ने नै यहि यथार्थपरक ईतिहास हो । पार्टीले देशलाई र जनतालाई बिभाजित गर्न बाहेक केहि गर्न सकेन । निञानिसाप बिगार्न्या भन्याको घुस् दिन्या र घुस् षान्या हुन् , ईन दुईको ता धन जीव गरिलियाको पनि पाप छैन । कपुतहरूले देशको ढुकुटी लुटेर देश ध्वस्त पार्न सिवाय केही गरेनन् र अनियमितता र भ्रष्टाचार हेर्ने संस्था अख्तियारलाई सुद्व भ्रष्ट बनाए । भ्रष्टाचारले गर्दा देशको कानुन तथा न्याय व्यबस्था पनि ध्वस्त भयो तसर्थ जबसम्म भ्रष्ट्रचार र अनियमिततालाई सहि ढङ्गले व्यबस्थापन गरिन्न देश उँभो लाग्दैन । नेपाली काँग्रेस पनि दक्षिण लागे मधेशवादी दलले पेल्ने उत्तर लागे कम्युनिषटले पेल्ने यथार्थतालाई बुझेर राजसंस्था र वैदिक सनातन धर्म संस्कृति तर्फ नढल्किकन सुखै छैन ।
चीनका महामहिमले भनेका कुरा चीनका एक नेपाल बुझ्ने चिनियाँ पाहुनाले व्याख्या गरे अनुरूप एमसिसि पास गरे पनि ईण्डो प्यासिफिकमा हाम फाले पनि अमेरिकन सेना नेपालमा तैनाथ गरेता पनि र बिअारअाईअन्तमा नेपालीले अब देश दुनियाको परिस्थितिको सार बुझ्न अत्यन्तै अावश्यक छ । मेरा साना दुषले अार्ज्याको मुलुक होईन , सबै जातका साझा फुलबारी हो । यो मुलुक यश देशको राज मुकुटले बलले मात्रै नभई बुद्वि बिवेक प्रयोग गरेर बचाएका हुन् । यो मुलुक निर्माण हुँदै गर्दा राजा जनता र सिपाहीले रगत तथा पसिना अथाहा रूपले बगाएका थिए र चातुर्यपुर्ण रूपले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सफल कुटनैतिक प्रयोग गरेर यो देश बचाएका थिए । जनताले बुझ्नु पर्ने नै यहि यथार्थपरक ईतिहास हो । पार्टीले देशलाई र जनतालाई बिभाजित गर्न बाहेक केहि गर्न सकेन । निञानिसाप बिगार्न्या भन्याको घुस् दिन्या र घुस् षान्या हुन् , ईन दुईको ता धन जीव गरिलियाको पनि पाप छैन । कपुतहरूले देशको ढुकुटी लुटेर देश ध्वस्त पार्न सिवाय केही गरेनन् र अनियमितता र भ्रष्टाचार हेर्ने संस्था अख्तियारलाई सुद्व भ्रष्ट बनाए । भ्रष्टाचारले गर्दा देशको कानुन तथा न्याय व्यबस्था पनि ध्वस्त भयो तसर्थ जबसम्म भ्रष्ट्रचार र अनियमिततालाई सहि ढङ्गले व्यबस्थापन गरिन्न देश उँभो लाग्दैन । नेपाली काँग्रेस पनि दक्षिण लागे मधेशवादी दलले पेल्ने उत्तर लागे कम्युनिषटले पेल्ने यथार्थतालाई बुझेर राजसंस्था र वैदिक सनातन धर्म संस्कृति तर्फ नढल्किकन सुखै छैन । चीनका महामहिमले भनेका कुरा चीनका एक नेपाल बुझ्ने चिनियाँ पाहुनाले व्याख्या गरे अनुरूप एमसिसि पास गरे पनि ईण्डो प्यासिफिकमा हाम फाले पनि अमेरिकन सेना नेपालमा तैनाथ गरेता पनि र बिआरआईमा नेपाल सहभागिता नजनाए पनि यो नितान्त नेपालको आन्तरिक कुरा ह‍ो अन्ततोगत्वा दुख नेपाल नै पाउने छन् पिडीत त भोग्ने नेपाली जनता नै हुन् । ईराकमा झैँ अमेरिका सेना फर्किदैन फर्काउने नै भए नेपाल डुब्ने पैसा दिने हैसियत हुनपर्छ नत्र सबै किसिमको नाकाबन्दीको पीडा भोग्ने नेपाल नै हो । तसर्थ नेपालको र शाह वंशीय राजाहरूको ईतिहास बुझौं तथा पृथ्वीनारायण शाहको दुर्दर्शिता सहितको दिव्य बाणी मनन गरौँ । राष्ट्रिय अखण्डता , अविभाज्य तथा अक्षुण्ण नेपाल , पुर्ण स्वतन्त्रता र सार्वभौम जनता ( पृथ्वीनारायण शाहको बाणीले नै प्रष्ट पार्दछ ” दुनियाँ जस देखि राजी रहन्छन् , उसैलाई कजाईँ दिनू ” ) शाह वंशियको देन र सिद्वान्त तथा बिचारलाई हामीले आत्मासात गर्न सक्न पर्दछ । यहि नै राष्ट्र नायक तथा राष्ट्रका एकिकरणका सिपाही श्री ५ बडा महाराजधिराज प्रति श्रद्वासुमन हुनेछ र पृथ्वी जयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवसको सार्थकता हुनेछ । श्री ५ पृथ्वीनारायण शाह अमर रहुन् ,राष्ट्रिय एकता दिवस जिन्दावाद ।
राष्ट्र पिता श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहको शाहस र योगदान बारे दुबईमा गरियो चर्चा र सम्झना